Date My Pet » PET vs. Partner Gifting – Iza no ianao Favour?
amin'ny Amilia Davidson
Maneran-tany, biby fiompy dia ampahany be indrindra amin'ny fiainantsika. Tsy afaka miaina raha tsy misy azy ireo; hitondrantsika azy ireo toy ny fianakaviana, pamper azy ireo isika adaladala, hitondra azy ireo izahay indraindray tsara kokoa noho ny mpiara-miasa na ny vady ... fikarohana vao haingana no nampiseho mahagaga olo-malaza ao amin'ny fa tena miantehitra ny biby fiompy 'Mpitsara ny toetra amam-panahy, rehefa mampiaraka mpiara-miasa vaovao, amin'ny biby-tompony mihazona mifanaraka amin'ny DateMyPet fiara: "Raha ianao no te hampiaraka aho, tsy maintsy mampiaraka ny biby ".
Toy ny manafintohina aza izany, no kokoa ny biby fiompy ny sasany ao amin'ny fianakaviana? Hizaha ny fitiavantsika ny biby fiompy, infographic ity dia manome fahazavana fo mampitaha mijery ny fahasamihafana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny biby fiompy, mpiara-miasa sy ny fianakaviany, maneran-fahasamihafana, ary favouritisms amin'ny fanomezana isan-karazany manome nandritra ny fety.
Izany dia nandray anjara tamin'ny infographic Amilia, amin'ny anaran'ny GoneDigging.co.uk.